Sandals® Luxury Luxury Resorts Sweeps Caribbean World Travel Awards
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ » Sandals® Luxury Luxury Resorts Sweeps Caribbean World Travel Awards
ဆုပေးပွဲ • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ကာရစ်ဘီယံ • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • ဂျမေကာသတင်းထူးများ • ဇိမ်ခံသတင်းများ • သတင်း • အပန်းဖြေ • အချစ်ရေးမင်္ဂလာဆောင်ပျားရည်ဆမ်းခရီး • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
Sandals Resorts သည် Caribbean World Travel Awards ကိုသိမ်းသည်
Sandals Resorts International (SRI) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ၂၈ ကြိမ်မြောက်ကာရစ်ဘီယံနှင့်မြောက်အမေရိကကမ္ဘာ့ခရီးသွားဆုပေးပွဲ virtual မိတ်ဆက်ပွဲတွင်ဂုဏ်သတင်းကြီးသောဆု ၁၂ ဆုကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Sandals Resorts သည်၎င်း၏နှစ် ၄၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကိုဂုဏ်ပြုရန်အကြောင်းပြချက် ၁၂ ချက်ရှိသည်။
Sandals သည်ကာရစ်ဘီယံ၊ အသိုင်းအဝိုင်း၊ ၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့်ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုတို့ကိုပံ့ပိုးပေးသောခရီးသွားအကြံပေးများကိုတန်ဖိုးထားသည်။
Sandals Resorts International ကိုအထူးအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည် ၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏ထိပ်တန်းဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ် အပန်းဖြေကုမ္ပဏီက၎င်း၏အခမ်းအနားအား ၂၈ နှစ်ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည် Sandals Resorts ၏နှစ် ၄၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်ထူးချွန်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်ခင်းကျင်းလျက်ရှိပါသည်။
Sandals Resorts International သည်ဆု ၁၂ ဆုအပါအ ၀ င်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏ထိပ်တန်းဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ် ဖိနပ်အပန်းဖြေစခန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏အားလုံးပါဝင်နိုင်သောမိသားစုအပန်းဖြေ: ကမ်းခြေတူရကီ & Caicos
၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏ ဦး ဆောင်ဇိမ်ခံ All-Inclusive Resort: ဖိနပ် Grenada
၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏ ဦး ဆောင်အပန်းဖြေစခန်း: ခြေနင်းတော်ဝင်ဘာဘေးဒိုးစ်
၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏ ဦး ဆောင်ပျားရည်ဆမ်းခရီး: တောင်ဘက်ကမ်းခြေ၊ ဂျမေကာဖိနပ်
၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏အပျော်ရွှင်ရဆုံးအပန်းဖြေ: ခြေနင်း Grande Antigua
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Bahamas ၏ ဦး ဆောင်ပါဝင်သောအပန်းဖြေစခန်း: ခြေနင်းမြဘုရားဂလားပင်လယ်အော်
Grenada ၏ ဦး ဆောင်အပန်းဖြေစခန်း ၂၀၂၁: ဖိနပ် Grenada
၂၀၂၁ တွင်ဂျမေကာ ဦး ဆောင်ပါဝင်သောမိသားစုအပန်းဖြေ: ကမ်းခြေ Negril
၂၀၂၁ တွင်ဂျမေကာ ဦး ဆောင် Resort: ဖိနပ် Montego ဂလားပင်လယ်အော်
၂၀၂၁ St Lucia's Leading Resort: ခြေနင်း Grande စိန့်လူစီယန်
၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏ ဦး ဆောင်စွန့်စားခရီးသွားဧည့်သည် ကျွန်းလမ်းကြောင်းကာရစ်ဘီယံ Adventures ကို
Sandals Resorts International ၏အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ Adam Stewart က“ Sandals Resorts International သည်ယခုနှစ်အတွက် Caribbean ၏ ဦး ဆောင်ဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလက်ခံသူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းအတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောဂုဏ်ပြုမှုဖြစ်သည်။ Stewart က ဆက်လက်၍“ ဆယ်စုနှစ် ၄ ခုကြာငါတို့ဒေသတစ် ၀ န်းမှာဧည့်ဝတ်ပြုမှုကောင်းမွန်ရေးအတွက်မယိမ်းယိုင်တဲ့ကတိကဝတ်ကိုထားရှိခဲ့တယ်။ "ငါတို့ကငါတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေ၊ တန်ဖိုးထားတဲ့ခရီးသွားအကြံပေးတွေ၊ ငါတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေကိုငါတို့ကတိတည်အောင်ဆက်လုပ်မယ်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကိုဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းအားဖြင့်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဆက်ထားမယ်။ "
တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတစ်နှစ်အကြာမှာခြေနင်းတောင်ပိုင်းကမ်းခြေ အဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည် ၂၀၂၁ ကာရစ်ဘီယံ၏ပျားရည်ဆမ်းခရီး World Travel Awards မှကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး Swim-Up Rondoval Suites၊ ၁၇၀၄၀ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပြီးအနောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင်အရှည်ဆုံးရေကန်နှင့်ဟန်းနီးမွန်းနှင့်ချစ်သူစုံတွဲများအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော ၁၁၂ ခန်းဒတ်ချ်ကျေးရွာ။
SRI ၏မိသားစုဖော်ရွေမှုအားလုံးပါဝင်သောအမှတ်တံဆိပ် Beaches® အပန်းဖြေစခန်းများနှင့်အတူ World Travel Awards တွင်လည်းအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည် ကမ်းခြေတာ့နှင့် Caicoအနိုင်ရသည် ကာရစ်ဘီယံ၏အားလုံးပါဝင်နိုင်သောမိသားစုအပန်းဖြေ ၁၈ ကြိမ်မြောက်အတွက် အသက်အရွယ်မရွေးမိသားစုများအတွက်ပျော်ရွှင်စရာများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်၊ တူရကီနှင့် Caicos ကမ်းခြေ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ကာရစ်ဘီယံနှင့် Key West တို့၏ဗိသုကာပုံဥပမာများဖြင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောကျေးရွာ ၅ ရွာကိုဖော်ပြထားသည်။ အဆုံးမဲ့မြေယာနှင့်ရေကစားအားကစားလှုပ်ရှားမှုများ၊ စတုရန်းပေ ၄၅၀၀၀ ကျယ်သောရေပန်းဥယျာဉ်နှင့်စားသောက်ဆိုင် ၂၁ ဆိုင်တို့ဖြင့်ဤအရာမျိုးတွင်လူတိုင်းအတွက်အရာတစ်ခုရှိသည်။
Sandals Resorts International ၏အစ်မကုမ္ပဏီ Island Routes Adventure Tours များ, ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဆုပေးပွဲကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုပြီးအိမ်ကိုယူခဲ့ပါတယ် ကာရစ်ဘီယံ၏ ဦး ဆောင်စွန့်စားခရီးသွားဧည့်သည် ၉ နှစ်အတွက် Island Routes သည်ဧည့်သည်များအားကျွန်းများရှိဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်အလှတရားများကိုအမှန်တကယ်နှစ်မြှုပ်စေသည့်အပြင်အတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။
“ မကြုံစဖူးသောအချိန်များတွင်ပင်ထူးခြားသောစစ်မှန်သော ဦး တည်ရာအတွေ့အကြုံများဆက်လက်ပေးအပ်ရန်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းသည်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများအပေါ်တွင်မြှင့်တင်ရန်အမြဲကြိုးစားနေစဉ်ဤအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ပေးအပ်သွားမည်ဟုကတိပြုသည်။
World Travel Awards ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလုံးတွင်အောင်မြင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးတစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် World Travel Awards အမှတ်တံဆိပ်သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း World Travel Awards သည်ကမ္ဘာ့ပထ ၀ ီဝင်ဒေသတစ်ခုချင်းစီ၏အဓိကပထ ၀ ီနယ်မြေတစ်ခုချင်းစီ၏တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စုပေါင်းအောင်မြင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကျင်းပသောဒေသဆိုင်ရာ Gala အခမ်းအနားများနှင့်အတူကမ္ဘာကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။
ဤဆုရအပန်းဖြေစခန်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ မင်္ဂလာပါ နှင့် beaches.comမရ။ World Travel Awards အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုပါ ကမ္ဘာကြီး.
Sandals® Resorts သည် Jamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, နှင့် Curacao တို့တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဧပြီလ၌ဖွင့်လှစ်ထားသောကာရစ်ဘီယံ၌အနှစ်သက်ဆုံး၊ အနှစ်သာရပါဝင်သော®အားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံကိုချစ်မြတ်နိုးသူနှစ် ဦး ကိုပေးသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအားလုံးပါဝင်နိုင်သောထိပ်တန်းအပန်းဖြေကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်အရာထက်မဆိုအရည်အသွေးပိုမိုပါဝင်မှုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Sandals Resorts သီးသန့်ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အဆုံးစွန်အတွက် Signature Love Nest Butler Suites®တို့ပါ ၀ င်သည်။ Professional English Butlers ၏ Guild မှလေ့ကျင့်ပေးသော butlers များ၊ Red Lane Spa®; 16-Star Global Gourmet ™ထမင်းစားခန်း၊ ထိပ်တန်းအရက်များ၊ အကောင်းစားဝိုင်များနှင့်အရသာရှိသောအထူးစားသောက်ဆိုင်များကိုအာမခံသည်။ ကျွမ်းကျင်သူPADI®အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်လေ့ကျင့်မှုရှိသော Aqua စင်တာများ၊ ကမ်းခြေမှအိပ်ခန်းသို့လျင်မြန်သော Wi-Fi နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သောမင်္ဂလာဆောင်များ Sandals Resorts များသည်ဧည့်သည်များအားဆိုက်ရောက်ချိန်မှထွက်ခွာချိန်အထိစိတ်အေးချမ်းမှုကိုအာမခံသည် သန့်ရှင်းရေး၏ခြေနင်းပလက်တီနမ် protocols များကာရစ်ဘီယံ၌အားလပ်ရက်များနှင့် Sandals အားလပ်ရက်အပန်းဖြေအာမခံအသစ်တို့ပါ ၀ င်သောအားလပ်ရက်အပန်းဖြေကာကွယ်မှုအစီအစဉ်ပါ ၀ င်သောအားလပ်ရက်ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်ပါ ၀ င်သောဧည့်သည်များအားအပြည့်အ ၀ ယုံကြည်မှုရှိစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြှင့်ထားသောကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးအစီအမံများ COVID-19 နှင့်ဆက်စပ်သောခရီးသွားအနှောင့်အယှက်များကြောင့် Sandals Resorts သည်မိသားစုပိုင် Sandals Resorts International (SRI) ၏မိသားစုပိုင် Beaches Resort များအပါအ ၀ င်နှောင်းပိုင်း Gordon“ Butch” Stewart မှတည်ထောင်သောမိသားစုပိုင် Sandals Resorts International (SRI) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ Sandals Resorts Luxury Included®ကွာခြားချက်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားကြည့်ပါ မင်္ဂလာပါ.
Turks & Caicos နှင့် Jamaica တို့တွင်အံ့မခန်းတည်နေရာသုံးခုနှင့် St. Vincent & Grenadines သို့စတုတ္ထမြောက်တည်နေရာနှင့်အတူBeaches® Resorts သည်မိသားစု ၀ င်တိုင်းအတွက်အဆုံးစွန်ဆုံးခရီးဖြစ်သည်။ Beaches Resorts များသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်အပန်းဖြေကုမ္ပဏီထက်မဆိုဆိုးဝါးသောရေပန်းများ၊ XBOX® Play Lounge၊ သီးသန့်ကလေးများစခန်းများ၊ ဆယ်ကျော်သက်နိုက်ကလပ်များ၊ အသိအမှတ်ပြု Nannies များ၊ Butler ၀ န်ဆောင်မှု၊ Red Lane® Spas၊ ကျွမ်းကျင်PADI®အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့်လေ့ကျင့်မှုများ ; နှင့်အခမဲ့ Wi-Fi ။ နှမ်းလမ်းကိုဂုဏ်ယူသောစပွန်ဆာတစ် ဦး အနေနှင့် Beaches Resorts သည် Sesame Street ဂိုဏ်းမှသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်သူတို့၏အားလပ်ရက်များကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်သည့် Sesame Street ဂိုဏ်းမှနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အပတ်စဉ်ပြပွဲများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကမ်းခြေအပန်းဖြေနေရာများသည်မိသားစုများဆုံဆည်းခြင်းနှင့်အထူးမွေးနေ့များမှလက်မှတ်ထိုးမည့်နေရာမင်္ဂလာအစီအစဉ်၊ ကမ်းခြေများစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သောမင်္ဂလာဆောင်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်သည်။ Beaches Resorts များသည်ဧည့်သည်များအား Caribbean ၌အားလပ်ရက်အပန်းဖြေချိန်တွင်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများဖြင့်ဧည့်သည်များစိတ် ၀ င်စားခြင်းမှထွက်ခွာချိန်အထိစိတ်အေးချမ်းမှုကိုအာမခံသည်။ ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းများသည်မိသားစုပိုင် Sandals Resorts International (SRI) ၏လက်အောက်ခံ Gordon“ Butch” Stewart မှတည်ထောင်ခဲ့သော Luxury Included® Sandals Resorts နှင့်ကာရစ်ဘီယံ၏အလုံးစုံပါဝင်သောအပန်းဖြေကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားကြည့်ပါ beaches.com.
Island Routes Caribbean Adventures ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခရီးသွားများနှင့်စွန့်စားရှာဖွေသူများကိုအကောင်းဆုံး၊ အဆုံးမသတ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းခရီးများကိုပြသရန်အတွက်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ ၁၂ ခုတွင်လည်ပတ်နေသော - Antigua; Aruba; ဘဟားမားစ်; ဘာဘေးဒိုးစ; ကေမန်ကျွန်းများ; ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ; ဂရန်နာဒါ; ဂျမေကာ; မက္ကဆီကို; စိန့်လူစီယာ; စိန့် Maarten နှင့်တာ့ & Caicos; မကြာမီ Curacao ကိုဖွင့်လှစ်ရန်ဤဆုရလူနေမှုဘဝပုံစံစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီတွင်ကျွန်းသူ၊ ပင်လယ်ဖော်များ၊ စွန့်စားရှာဖွေသူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသခင်များပါ ၀ င်သည်။ Island Routes မှအဖွဲ့သည်ကာရစ်ဘီယံစီးပွားရေးရှုထောင့်မှအပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုကိုပံ့ပိုးပေးပြီးကုမ္ပဏီအားရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအစီအစဉ်များနှင့်ကုန်းမြေနှင့်ရေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှု Islandroutes.com.